Gaari Uuraal Ah Oo Askarta Itoobiya Looga Gubay Galgaduud. – Bogga Calamada.com
Gaari Uuraal Ah Oo Askarta Itoobiya Looga Gubay Galgaduud.
March 31, 2016 9:53 am Views: 14
Wararka ka imaanaya gobalka Galgaduud ayaa sheegaya In saaka qarax culus lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo maalintii Shanaad ku socdaalaya wadada isku xirta degmooyinka Dhuusamareeb iyo Ceelbuur.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago ayaa waxey la kacday gaari Uuraal ah oo askar Itoobiyaan ah la socdeenâ€™waxaana qaraxaÂ uu ka dhacay deegaanka Ceel-qooxle.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in gabi ahaan uu burburay gaariga Uuraalka kaasi oo uu saarnaay qoriga Suugaâ€™waxaana sidoo kale qaraxa baqti iyo dhaawac ku noqday tiro askar Itoobiyaan ah.
Waa gaarigii afaraad oo todobaadkan gudihiisa laga gubay kolanyada Xabashida Itoobiya oo maalintii Axada kasoo baxay degmada Dhuusamareeb kuwaasi oo aysan wali u suura galin iney gaaraan halka ay doonayaan oo ah degmada Ceelbuur.